Breziliana kaominina vehivavy mitady lehilahy fananahana
Vehivavy avy ny vehivavy Breziliana ny kaominina (nadika avy amin’ny teny portiogey»Vady Kodaira») niantso ny olona manerana izao tontolo izao amin’ny tolo-kevitra mba hanosika azy ireo fonenana maharitra. Ny fiaraha-monina, miorina ao amin’ny tanàna Belo Vale, dia momba ny vehivavy Breziliana taona roa-polo amby dimy amby telo-polo taona. Antso ny olona eto an-tany, mponina niantso ny alalan ‘ny pejy’ ny kaominina ao amin’ny Facebook sy ny gazety ao an-toerana.
Na izany aza, tsy ny olona rehetra dia mety ho lasa ny mponina ao amin’ny kaominina izy dia tsy maintsy ho tsy manam-bady ary dia ho takiana mba handray ny matriarchal fitsipiky ny fiainana: eo an-toerana ny Breziliana dia zatra mba hitantana ny fiaraha-monina ireo ihany, tsy misy ny fanampiana mpikambana ao amin ny mifanohitra amin’izany firaisana ara-nofo.
Ny tantaran’ny tanàna vita indray V
Izany dia naorin’i Maria Seigniory de Lima, voaroaka ho any amin’ny fianakaviana noho ny famadihana ny vadiny.
Nandritra ny taona maro, ny fomba fiainana ao amin’ny kaominina dia tsy nandalo fiovana lehibe
Ny tena fidiram-bola ao amin’ity faritra ity dia ny fambolena, maro ny vehivavy ao amin’ny kaominina manana ny vadiny sy ny zanany lahy, fa izy ireo dia voatery miasa any amin’ny tanàna hafa, ary ny sasany ihany no avela hahita ny faran’ny herinandro. Ny antso ankizivavy nahamarika olona rehetra manerana izao tontolo izao, ao anatin’izany ny solontena avy any Brezila. Araka ny andian-taranaka tanora Breziliana miaina eo amin’ny fiaraha-monina, dia mbola tsy nanoroka nandritra ny taona maro ary te-hanambady
← Hihaona ho an'ny fiombonana. Online chat amin'ny fisoratana anarana maimaim-poana
Tsy vaovao amin'ny finday ao Brezila. Fiarahana ho an'ny olon-dehibe. Tsy misy fisoratana anarana. Tena sary →